Ny fahatsaran'i Microsoft ao amin'ny Parchi, fampiharana iray handraisana naoty | Androidsis
[APK] Parchi dia fampiharana vaovao tsara handraisana naoty haingana avy amin'i Microsoft
Averina eto indray isika fampiharana Microsoft tsara hafa izay nidina tao amin'ny rindranasa Android sy fivarotana lalao video hampisehoana amintsika ny asany tsara sy ny hatsarany lehibe amin'ny rindrambaiko araka ny naseho tao amin'ny fampiharana tsy tambo isaina tao anatin'ny volana sy taona lasa. Tsara homarihina fa i Microsoft dia nanjary ampahany tamin'ireo mpanafika tsara izay manana tanjona kendrena ao amin'ny Google Play Store mba hitondra fampiharana famokarana ho an'ireo mpampiasa izay manana ny tsara indrindra azo jerena amin'ny fampiasa tsara sy ny interface misy kalitaon'ny fahitana sy fampisehoana.
Toy izany koa no mitranga amin'ny Parchi, ilay fampiharana vaovao handray naoty izay avy amin'ny Microsoft Garage sy izay manatevin-daharana ny famokarana izay an'i Redmond, toy ny an'ny Office sy ny OneNote izay manome valiny tena tsara. Parchi dia tonga ho fampiharana iray mba handray naoty haingana izay mety ho naoty miraikitra izay apetantsika amin'ny bosoa eo amin'ny rindrina. Io no hevi-dehibe momba ny fisiany sy ny antony lehibe nahatongavany, zavatra mifanipaka amin'ny OneNote, saingy azo antoka fa manana ny anton'izany izy ireo ankehitriny mba ahafahantsika maneho hevitra momba azy ho iray amin'ireo zava-baovao aterak'i Microsoft.
1 Fanamarihana haingana miaraka amin'i Parchi
2 Ny hatsarana amin'ny fampandrosoana app
Fanamarihana haingana miaraka amin'i Parchi
Parchi, miaraka amin'io anarana io izay tena tsara tsara rehefa manonona azy ianao izay rehetra mety ho irintsika amin'ny fomban'ny endrika tsara toa an'i Keep by Google. Azo antoka fa miaraka amin'io no tianao ahita ny tarehy sy mahasarotra azy. Ary mety hisy hieritreritra ny antony, fa izany no izy, ankehitriny isika dia hanaparitaka ny kalitaon'ity fampiharana ity izay mihevitra ihany koa fa zava-dehibe ny fahaizana mandoko ny naoty mba hanavahana azy ireo, zavatra ilain'ny Keep.
Hatramin'ny fotoana voalohany hametrahan'ny olona tanana amin'i Parchi dia mahatsapa izany hatraiza ny fahaizan'ny Microsoft ao amin'ny rindrambaiko. Volavola tsara, voavolavola tsara ary miaraka amina asa tena tsara izay mamela anao hitety azy tsy misy lag ary tsy misy sakana eny an-dalana.
Manana tontonana fitetezana ny sisiny ankavia izahay izay mamela antsika hiditra amin'ny fisie fisie, ireo tiana ary ny mety jereo daholo amin'ny tag, zavatra tena manandanja mba hananana ireo naoty nataontsika sokajina tsara. Ny teboka manan-danja hafa amin'ny fampiharana dia ny bokotra FAB izay ahafahana miditra amin'ny famoronana naoty fohy izay lazaiko etsy ambany.
Ny hatsarana amin'ny fampandrosoana app
Tsindrio ny bokotra FAB, ary ny fananganana naoty haingana miaraka a repertoire tsara amin'ny safidy Ny tsirairay amin'izy ireo dia voalamina tsara, mba hahafahantsika mamantatra haingana hoe inona ireo tag miaraka amin'ny telo efa voafaritra mialoha ho safidy mailaka amin'izy ireo sy ny kisary "+" izay mitondra antsika any amin'ny lisitr'izy ireo miaraka amin'ny fahaizana mamorona azy manokana ary natao manokana.
Ao amin'ny bara ambony isika dia manana safidy manan-danja maro. Ny iray dia ny loko an'ireo naoty hoe Keep avy amin'ny Google, ny iray hafa dia ny fahaizana manampy sary na maka azy amin'ny fakantsary ary ny farany dia ny manampy lisitra misy bala mba hamoronana lisitra tokony hatao. Ny safidy hafa ananantsika ato amin'ity bara safidy ity dia safidy konteksina hizarana ny naoty, marika azy io ho toy ny tianao indrindra, tahirizo azy io, hamafana azy io, apetaho eo amin'ny efijery hidin-trano sy izay mety ho fisian'ny fampiharana.
Mba hamaranana dia manana isika hitsin-dalana roa, iray hamoronana fampahatsiahivana ho fanairana ary ny faharoa hanoritra ny maripeo an'ity naoty fohy ity. Amin'izany rehetra izany eo ambonin'ny latabatra dia afaka mitaky zavatra kely kokoa isika, satria miaraka amin'ny fonosana endri-javatra feno izay mety hananana fampiharana ity karazana ity.
Es tsy mampino tsotra izao fa amin'ny kinova voalohany dia tonga amin'ny fomba toy izany, noho izany dia mihazakazaka i Parchi ary miala haingana dia haingana mba hahatratra ireo safidy lehibe hafa toa ilay Keep, OneNote na Todoist voalaza etsy ambony.
Satria tsy misy eto amin'ny firenentsika izao dia azonao atao midira amin'ny APK etsy ambany ho an'ny fisintomana maimaim-poana. Microsoft tena tsara indray.
Sintomy ny APK an'ny Parchi
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » apk » [APK] Parchi dia fampiharana vaovao tsara handraisana naoty haingana avy amin'i Microsoft
TapDeck manampy 'Collections', onjam-pejy misy sary avy amin'ny sokajy iray